Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Mgbe ọ na-abịa eleta Europe kasị ama n'isi obodo, O doro anya na London nọ n'elu ndepụta ndị njem ọ bụla na enwere ọtụtụ ihe ị ga -eme na London. Ọ na-nwetara a ogologo, adọrọ mmasị mere na; mara mma akara na nlegharị anya; ma enwere ọtụtụ ihe…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ọ bụrụ na ị na a na-eme atụmatụ a njem Amsterdam ma ka figuring oge kacha mma na-aga, nwere ike ị chọrọ tụlee a nleta n'oge Restaurant Week 2019 na Netherlands. Izu Weeklọ oriri na ọụtaụ bụ ihe oriri na-eme nri nke na-ewere ọnọdụ kwa afọ n'akụkụ ụwa niile…